एक महिनाको अस्पताल बसाइपछि जब उनी घर फर्किन् उनलाई संसार नै अन्धकार लाग्न थाल्यो । उनी निकै चिन्तित भइन् । दुर्घटनामा परी स्पाइल कर्ड इन्जुरीबाट ग्रस्त देवी हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिइन्, ह्विलचेयरविना हिँडडुल गर्न असम्भव थियो । लामो समय उनी डिप्रेसनको सिकारसमेत भइन् । खान, लगाउन, हिँड्न हरेक कुरामा अरुको सहायता लिनुपर्ने भएपछि उनलाई लाग्यो–ह्विलचेयरमा कसरी जिन्दगी बिताउने ? धेरै पटक उनले मर्ने प्रयास गरिन् । आचार्य भन्छिन्–‘धेरै पटक मर्ने प्रयास गरे पनि सजिलै कहाँ मर्न सकिँदो रहेछ र ? बाँचेर केही गर्न सक्छु भन्ने त हिम्मत नै थिएन, मर्न भनेर लुकी–छिपी धेरै औषधि एकैपटक खाने गरेको उनले सुनाइन् ।